Suisse dia manokatra ny sisintaniny amin'ireo mpizahatany ao amin'ny Golfa vita vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Soisa » Suisse dia manokatra ny sisintaniny amin'ireo mpizahatany ao amin'ny Golfa vita vaksiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Handray an-tanana ireo mpitsidika GCC feno vaksiny i Suisse rehefa hanokatra ny sisin-tany amin'ny 26 Jona 2021.
Andrasana ny fangatahana matanjaka avy amin'ireo firenena ao amin'ny Council Cooperation Council izay manana farihy madio mangarahara, hatsaran-tarehy voajanahary miavaka, rivotra madio ary hetsika ivelany mitaona ny mpitsidika.
Ny fanapahana vaovao dia mamela ny mponin'ny GCC, izay vita vaksinin'ny vaksiny nankatoavin'ny Ema sy ny WHO, hiditra any Suisse tsy misy fitsapana PCR mialoha na fitsidihana na karokantin rehefa tonga.
Ireo mpizahatany ao amin'ny Helodrano dia tompon'andraikitra amin'ny fijanonana mandritra ny iray tapitrisa alina isan-taona any Suisse mialoha ny areti-mandringana.
Ireo manampahefana misahana ny fizahan-tany ao amin'ny Canton (fanjakan'i Graubunden), fantatra ihany koa amin'ny hoe Grisons, any Switzerland dia miomana amin'ny fahavaratra feno rehefa miomana ny hanokatra ny sisin-tany ny governemanta Soisa amin'ny 26 Jona ho an'ireo mpitsidika avy amin'ny Filan-kevitry ny fiaraha-miasa amin'ny Golfa (GCC) firenena efa vita vaksiny tanteraka.
Ny didim-pitsarana vaovao, izay nankatoavina tamin'ny Alarobia 23 Jona, dia mamela ireo mponina ao amin'ny GCC izay vita vaksiny niaraka tamin'ny maso ivoho eropeanina (EMA) sy ny vaksiny nankatoavin'ny OMS, toy ny Pfizer na Sinopharm (hatramin'ny 12 volana aorian'ny vaksiny) Soisa tsy misy fitsapana PCR mialoha ny dia na quarantine rehefa tonga.
“Suisse sy ny faritr'i Graubunden indrindra dia toerana fialantsasatra ankafizin'ny mpizahatany avy amin'ny Helodrano ary miaraka amin'ny fanokafana ny sisintany, manantena ny handray azy ireo indray isika amin'ity fahavaratra ity.
"Amin'ity taona ity manokana, ny rivotra madio, ny hatsarana voajanahary miavaka, ny toetr'andro malefaka ary ny hetsika ara-pahasalamana mahasalama toy ny fitsangantsangana, bisikileta ary ny sambo no mahatonga azy io ho tonga lafatra ho an'ny fikatsahan'ny fianakaviana", hoy i Tamara Loeffel, Lehiben'ny fampandrosoana ny asa aman-draharaha, mitsidika an'i Graubunden.
Ary raha ny loharanom-baovao ofisialy, taona vitsivitsy talohan'ny areti-mandringana dia tompon'andraikitra amin'ny fijanonana mandritra ny iray tapitrisa isan-taona any Suisse ny mpizahatany amin'ny Golfa, miaraka amin'ny fandaniana isan'andro manodidina ny 466 $ US isan'andro.
Maro amin'ireo mpitsidika ny GCC dia mpizahatany miala sasatra, mandeha mandritra ny volana fahavaratra. Mponina avy any Emirà Arabo Mitambatra sy Arabia Saodita no mandrafitra ny ampahany betsaka (70%) amin'ireo mpizahatany tonga any Suisse avy amin'ny GCC, miaraka amin'i Koety sy Qatar mihoatra ny 10% miaraka amin'ny fandanjana avy any Bahrain sy Oman.